पर्बत जिल्लाको बाच्छा गाउँको ठिटो ४० डाँकासँग एक्लै भिड्ने बीर गोर्खाली ठिटो बिष्णु श्रेष्ठलाई हृदय देखि नै सलाम ! – नेपाली सूर्य
पर्बत जिल्लाको बाच्छा गाउँको ठिटो ४० डाँकासँग एक्लै भिड्ने बीर गोर्खाली ठिटो बिष्णु श्रेष्ठलाई हृदय देखि नै सलाम !
January 2, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on पर्बत जिल्लाको बाच्छा गाउँको ठिटो ४० डाँकासँग एक्लै भिड्ने बीर गोर्खाली ठिटो बिष्णु श्रेष्ठलाई हृदय देखि नै सलाम !
पर्बत जिल्लाको बाच्छा गाउमा जन्मी माथि गोर्ल्यांग गल्छिना र तल बाच्छाखोला हुँदै काली गङ्गा सम्मका पाखा पखेरा खोच खंतेरा हरुसंग हाँस्दै खेल्दै पिरती गास्दै देउराली खोला हुदै कडेनी साँघु मुनि र भुतेको दहमा पौडी खेल्दै बाच्छा गाउको रमाइलो बाताबरण संगै
हुर्किनु भएका युबा बिष्णु श्रेष्ठ जसले बाच्छा गाउको नाम संगै सिंगो देशको शिर उच राख्न सफल हुनुहुन्छ जो एक्लै मध्यरात घना जंगलमा यात्रुबाहक रेलभित्र ४० डाँकासँग भिडेर कैयौंको जिउधन जोगाएर बहादुरी देखाउने ती सिपाही बहादुर बीर गोर्खाली बिष्णु श्रेष्ठलाई मेरो हृदय देखि नै सलाम ।
जन्मथलो बाच्छा हुँदै कर्मथलोको भारतीय सैनिक भर्ति हुन पुग्नुभएका बिष्णु हाल पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ । विष्णु श्रेष्ठ त्यस्ता बहादुर हुन्, जो भदौ १७ गते मध्यरात राँची-गोरखपुर रेलयात्राका क्रममा डाँका समूहसँग एक्लै भिडे, एउटै खुकुरीको भरमा। तीन डाँका मारिए, लुटिएका लाखौं मूल्यको धनमाल फिर्ता भयो। श्रेष्ठले धेरैलाई जीवनदान मात्र दिएनन्, बाबुआमाकै सामुन्ने डाँका समूहबाट बलात्कृत हुन लागेकी युवतीको इज्जत पनि जोगाइदिए।
राँची-गोरखपुर चल्ने उक्त रेल छुटेको चार घन्टापछि राति १२ बजे पश्चिम बंगालको चित्रगन जंगल आइपुग्दा करिब ४० जनाको डाँका समूहले रोकेर लुटपाट मच्चायो। सबै यात्रुबाट एकेक गरी गहना, मोबाइल, नगद, ल्यापटपलगायत धनमाल लुटेको उनी टुलुटुलु हेरिरहे। तर, आफ्ना कुनै सामान दिएनन्।
जब डाँकाहरूले जबर्जस्ती कपडा उतार्न थालेपछि बाबुआमासँगै रहेकी १८ वर्षीया युवतीले गुहार मागिन्, त्यसपछि उनले मन थाम्न सकेनन्। एक्लै खुकुरीको सहाराले डाँकासँग भिड्न थाले।
उनले सुरुमा एकजनालाई कब्जामा लिएर खुकुरीको सहारामा अरूमाथि आक्रमण गरेका थिए। एक-एक गर्दै तीनजनालाई मारेर अन्य आठजनालाई घाइते बनाएपछि अरू डाँका भागेको उनले सुनाए। त्यस क्रममा डाँकाको खुँडा प्रहारबाट उनको बायाँहातमा गहिरो चोट लाग्यो भने युवतीको गर्धनमा समेत खुँडाले सामान्य चोट पुर्‍यायो।
झारखण्ड राज्यको नक्सलवादी प्रभावित उक्त क्षेत्रमा रेल सेवामाथि पटकपटक यस्ता डकैतीका घटना हुने गरेका छन्। ‘तिनैमध्येका पेशेवर डाँका समूहले दाप, खुँडा र पेस्तोल देखाएर उक्त रेलका यात्रुमाथि डकैती गर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरूतर्फ ज्यान जाँदा पनि गोली चलाएनन्, सायद पेस्तोल नक्कली हुन सक्छ।’
२० मिनेट रक्तपातपूर्ण भिडन्तपछि डाँका समूह तितिरबितर भएको थियो। रेल चित्ररन्जन स्टेसन पुग्दा श्रेष्ठलाई लिन प्रहरी र सञ्चारकर्मी पुगे। रेल यात्रुका ४ लाख रुपैयाँ नगद, ४० थान सुनका सिक्री र औंठी, २ सय थान मोबाइल सेट, ४० थान ल्यापटपलगायत धनमाल प्रहरीले फेला पारेको थियो।त्यसमध्ये घाइते अवस्थाका आठ डाँकालाई प्रहरीले समात्यो।
प्रहरीले हातमा चोट लागेका श्रेष्ठलाई उपचारका लागि सुरक्षासहित तत्काल रेलवे अस्पताल पुर्‍यायो। भारतका प्राय सञ्चारमाध्यमले पनि उनलाई पछ्याए। श्रेष्ठका घाइते अवस्थाको फोटो र बहादुरीको वर्णनसहितका समाचार टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भाष्कर, स्टार न्युजलगायत सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकतासाथ प्रकाशन-प्रसारण भयो। एमबिबिएस अध्ययन गर्न हिँडेकी छोरीलाई आफ्नै आँखाअगाडि बलात्कार हुनबाट जोगाएबापत युवतीका बाबुआमाले श्रेष्ठलाई ३ लाख रुपैयाँ इमान दिने तत्कालै घोषणा गरेका थिए।
‘हातको गहिरो चोटले नशामा समेत असर गरेपछि तेस्रोपटक कमान्ड अस्पताल कोलकातामा दुई महिना नसासम्बन्धी उपचार गराएपछि निको भयो,’ श्रेष्ठले भने।
गोर्खाली सिपाहीको बहादुरीलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै भारत सरकारले उनको अवकास रद्द गरी पुनर्बहाली गरेको छ। एकमहिने घरबिदामा पोखरा रहेका उनलाई नेपाल आउँदा र फर्कँदा भारत सरकारका तर्फबाट दुई सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराइएको छ। श्रेष्ठलाई पल्टनले तत्कालै ५० हजार नगद पुरस्कारले सम्मान गरिसकेको छ। भारत सरकारको औपचारिक सम्मानपछि उनले बढुवासमेत पाउनेछन्।
‘१७ वर्षे सेवाअवधिमा कैयन् लडाइँ लडे पनि यस्तो भिडन्त झेलेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उक्त घटना सपनाजस्तै लागिरहेछ।’ डाँका समूहसँगको साहसिक भिडन्तलाई उनी मानवीय कर्तव्य भन्न रुचाउँछन्। ‘त्यो अवस्था सहन सक्ने खालको थिएन, ती डाँकालाई मुला काटेजस्तो कसैको ढाड, छाती, घाँटीमा खुकुरीले छप्काएँ,’ उनले भने, ‘गोर्खालीको चिनो खुकुरी भएपछि साँच्चै बहादुर हुन सकिने रहेछ। त्यो नहुँदो हो त केही उपाय थिएन।’
विष्णुका बाबु गोपाल पनि भारतीय सोही पल्टनबाट २०२८ सालमा अवकासप्राप्त सिपाही हुन्। विष्णु बाबुकै प्रेरणाले सिलोङ पुगेर सिपाहीमा भर्ना भएका थिए। उनका एकमात्र भाइ रमेश पनि १३ वर्षदेखि सोही पल्टनमा छन्। श्रेष्ठलाई पोखरास्थित ‘मितेरी आमा समूहले’ हालै पोखरामा सम्मान गरेर स्वदेशमा सम्मानको सुरुआत गरेको छ।
दार्चुलामा जीप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको सङख्या ११ पुग्यो